Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche – Page 4
Tafajoro ny Labatoara manara-penitra ao Tsiroanomandidy
SIC	 Déc 31, 2019
Ho fanatanterahana ny fampanantenana nataon’ny Filoha Andry Rajoelina, dia tafatsangana ny #labatoara manara-penitra ao amin’ ny Fokontany Andrefan’ny gara,Tsiroanomandidy, Faritra Bongolava. Ny Ministeran’ny Fambolena sy ny…
MOMBA NY KARATRA FANANGONAM-BOKATRA ANDRANOMASINA TAONA 2019 Raha ny 5 taona lasa no jerena dia nisy fiovaovana ny karatra fanangonam-bokatra. Ny taona 2019 no nahitana karatra fanangonam-bokatra betsaka indrindra izay…
Arrêté n° 28239/2019 fixant les activités de collecte de crabes (Scylla Serrata)
Ady amin’ ny haromontana : Vaksiny miisa 100 000 avy amin’ ny OIE.
SIC	 Déc 20, 2019
Aretiman-doza sy mahafaty ny haromontana, ary mifindra amin’ ny olona amin’ ny alalan’ ny kaikitra na rangotry ny saka sy ny alika. Ny fanaovana vaksiny ny alika sy ny saka ihany no hany tokana hisoroana izany aretina izany. Ho…
FDA : manatsara hatrany ny fomba fiasany
SIC	 Déc 18, 2019
Notanterahina ny Alatsinainy 16 desambra 2019 tao amin’ny Panorama ny atrikasa fanehoana ny fanadihadiana izay natao teo anivon’ny FDA (Fond de Développement Agricole) tao anatin’ny tetikasa PAPAM. Ny FDA moa dia singa iray ao…
Vokatra biolojika hifehezana ny olitra mpanimba ny voly katsaka
SIC	 Déc 16, 2019
Tsy tokony hitebiteby sy hanana ahiahy intsony ny tantsaha Malagasy mpamboly katsaka manoloana ny “Chenille legionnaire d’Automne -CLA” izay fahavalon'ny voly, indrindra ny katsaka. Noho ny ezaka nataon’ny Ministeran’ny Fambolena sy…
Fandraisan’i Madagasikara anjara amin’ny zaikabe voalohany eo amin’ny…
SIC	 Déc 10, 2019
« Mifanome tanana hisian’ny fampandrosoana maharitra eo amin’ny alalan’ny fiaraha-miasan’ny firenena Sinoa sy Afrikanina amin’ny sehatry ny famokarana ». Io no lohahevitra novohizina nandritry ny Zaikabe voalohany eo amin’ ny…
Fampiroboroboana ny harena manga
Anisan’ireo firenena dimy hisitraka ny « Tetikasa ho fanatsarana ny velon-tena, sy fiahiana ara-tsakafo ary ny aro-loza amin’ny alalan’ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo vondron’ny mpanjono mivelona amin’ny jono eny…
Fandaharanasa DEFIS: miasa manapariaka ny famokarana manaraka teknika any amin’ny Faritra Androy
Tonga nidina ifotony tany Ambovombe, Faritra Androy ny ekipa mpandrindra ny fandaharanasa DEFIS, nijery ny zava-bita sy ny drafitrasa hohatao amin’ny fampandrosoana ny famokarana any an-toerana.Faritra azo hamokarana tsara ny Faritra…
Fampijoroana ny fanahim-pirenena : « Dinika Nosy Malagasy, ampitao ny hevitrao »
SIC	 Déc 9, 2019
Nosy Sambatra no îles Glorieuses teo aloha, Nosy Ampela no Europa, Nosy Kely no Juan de Nova ary Nosy Bedimaky no anarana malagasy iantsoana ny Bassas da India manomboka izao. Sarotiny ny Malagasy amin’ny famerenana ny…
Fametrahana ny CSP Nosy-be
Teknisianina vaovao miisa 106 hanampy tosika ny tantsaha
Andro iraisam-pirenena ho an’ny ronono taona 2020
08 jona: andro maneran-tany ho an’ny ranomasimbe
Le MAEP entérine les résultats de l’évaluation de la stratégie et du programme pays du FIDA et donne ses exigences pour un nouveau cycle